Nchedo N'ịntanetị | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Enwere njikwa na nnabata ndị nne na nna na - akwụghị ụgwọ, iji nyere gị aka isetịpụrụ ụmụ gị oke nchekwa, mana a ga - achọkarị ịtọlite ​​ha. Onye na - ahụ maka ịntanetị gị (dịka BT ma ọ bụ TalkTalk) ga - enye ndị nzacha n'efu iji nyere aka gbochie afọ ole ọdịnaya ekwesighi maka ụmụaka, yana weebụsaịtị weebụsaịtị nke UK Safer Internet Center ị nwere ike ịlele nkuzi vidiyo (www.saferintenet.org.uk/parental-controls) nke na-egosi gị otu esi achọ ma setịpụ ihe ndị a. Ndị ọrụ ekwentị niile (dịka O2 ma ọ bụ Vodafone) na-enyekwa njikwa ndị nne na nna dị otú ahụ n'efu. Ebe nrụọrụ weebụ nke ndị na-emepụta ngwaọrụ (dịka egwuregwu consoles) kwesịkwara ịkọwapụta njikwa ndị ị nwere ohere.
Enwere ike ịchọta nhọrọ nzacha n'ime weebụsaịtị na ọrụ n'onwe ha, dịka ọmụmaatụ na ntọala YouTube ma ọ bụ ntọala 'nchekwa' enwere ike itinye ya na injin ọchụchọ dịka Google ma ọ bụ Bing. Onwere ọrụ ufodu emere maka umuaka (dika YouTube Kids na BBC iPlayer Kids apps).
Njikwa nne na nna nwere ike ichedo paswọọdụ, yabụ ọ bara uru ịhọrọ paswọọdụ siri ike ma ghara ịkekọrịta ya. Njikwa nne na nzacha bụ ezigbo mbido mana ọ dị mkpa ịmata na ha anaghị arụ ọrụ nke ọma 100%. Ha bụ ezigbo enyemaka, mana ọ bụghị ihe ngwọta, ma na-arụ ọrụ kachasị mma na nlekọta na nlekọta nke ndị nne na nna, iji nyere ụmụ gị aka ịghọta otu esi echekwa na ịntanetị. Ka ụmụaka na-etolite ma na-etolite, yabụ na mkpa ha dị n'ịntanetị, yabụ ị nwere ike chọọ inyocha oge niile njikwa njikwa nne na nna gị iji nabata nke a.
Netmụaka emepụtala akwụkwọ bara uru a kpọrọ 'Idobe n'okpuru ọnwu n’enweghị nsogbu na ntanetị'. Ọrụ Childnet bụ ịrụ ọrụ na mmekọrịta ya na ndị ọzọ gburugburu ụwa iji nyere aka mee ka ịntanetị bụrụ ebe dị mma na nchekwa maka ụmụaka.
Childnet - Nne na Nna / Onye Nlekọta Ama